Ukwelashwa kwe-TB by izindlela zanamuhla kukghonekako nalokha ikhona
Isifo sofuba ukhona emhlabeni akuyona ekhulwini lokuqala. Ngaphambili, wabizwa ngokuthi consumptive, futhi mangisho, leli gama lingase lingabi ngokunembe kakhudlwana adlulisele okushiwo isifo. nesineke TB ngokoqobo zibulawa phambi. Kodwa kuyilapho ukusetshenziswa kwaba ngaleso sinqumo, manje ukwelashwa sofuba ezimweni eziningi, baphumele tle. Ngokuvamile, sibonisa ukuthi ngisho kuholela ukuqedela yokutakula.
Ukwelashwa nokuvikelwa sofuba: ukubukeka ku esidlule
Kwaphela isikhathi eside iziguli zesifo sofuba kubhekwe ezingenathemba. ukuphathwa kwabo ngokuyinhloko, empeleni ekwenzeni izimo ingozi kakhulu: ukuthula, ethule, sekuhwalele, embhedeni ukuphumula kalungisiswa izidakamizwa (zinikelwe nje ngoba akukho indlela ukuze kwelashwe iziguli kwakubonakala kokuziphatha okubi). Ngakho-ke ukwehla onokuthula kancane isiguli.
Kancane kancane Medicine elathola lolu daba: ekwelapheni isifo sofuba angase abe ukubaluleka okukhulu lapha ukuthola umoya nokukhanya kwelanga fresh. Futhi Samara Dr. Nestor vasilevich Postnikov ngekhulu le-19 futhi sonke senziwa revolution langempela nokwelashwa kweziguli sofuba. Nihlola umusa omkhulu futhi omuhle ukuphulukisa izimfanelo nobisi lwawo, livula eduze Samara lokuqala kumysolechebnitsu emhlabeni. ukuphathwa isifo sofuba Kwenziwa ngaso i izindlela kuze kube manje engakaze ibonwe: iziguli (phakathi kwabo kwakukhona ngisho bantu bobukhosi nezikhonzi, hhayi kuphela Russian) kudlalwa ibhola lomphebezo, lokhu ukhwele amahhashi, baphuza waphuza futhi aphuze ubisi fresh lwawo futhi ... wasimama ngokugcwele! Umi nguDkt ukwelashwa Innovator umtholampilo sofuba wathola emhlabeni wonke odumo. Waya Museum ekhona lapho akagcini kuze kube manje.
ukwelashwa kwe-TB ne ngemithi yanamuhla
Nakanjani ukuthi akufanele ukuntela isifo ezifana akufanele overestimate kwamandla abo Ukukhetha efanele yokwelapha. Izidakamizwa ukuze kwelashwe isifo sofuba angaqoka udokotela! Nokho, ukwenza akukho mfihlo yamagama abo, elithi akekho ohambayo: kuya antituberculosis main ejenti zihlanganisa izidakamizwa "streptomycin", "ethambutol", "rifampicin", "i-INH" futhi "pyrazinamide". Futhi hhayi oqokwe somunye wabo, futhi lonke eziyinkimbinkimbi. Iqiniso lokuthi M. sofuba ngokushesha kakhulu ukuzivumelanisa izidakamizwa "funda" ukuba simelane nawo, kodwa ngoba udinga ukubhekana nazo ngesisekelo ukuhlaselwa yangempela. Uma umzimba lesiguli wazibonakalisa simelane nokuhlaselwa ukwakhiwa ngenhla ukuze bayothola ukwelashwa exhunywe ukuthaka imithi uqimba yesibili "Kanamycin" "Capreomycin" "Amikacin" "Prothionamide" "Ethionamide" "Cycloserine" "Rifabutin" "PAS" futhi fluoroquinolones. Isikimu ukuthola ngazinye eyenzelwe esigulini ngasinye. Ngokuvamile, ukwelashwa kwe-TB ihlukaniswe izigaba eziningana, ngayinye izinyanga 2-4.
Isifo sofuba kanye imithi yendabuko
Kungakhathaliseki ukuphathisa impilo Folk yabo imithi? Nquma Yiqiniso, wonke umuntu. Nokho, ebesingakutusa ukuziba ipumelelo isayensi yesimanje. Noma kunjalo, i-TB - isifo esiyingozi, u esiyingozi emphakathini futhi, ngeshwa, abathi amakhulu ezinkulungwane zabantu unyaka ngamunye. Noma kunjalo, ulwazi zabantu zingaba usizo kakhulu, ikakhulukazi uma ehlangene ukwelapha ngokwendabuko.
Kanye oshiwo ngenhla Dr. Samara, owayephila Folk abelaphi ukuncoma iziguli eziningi ukuba ngaphandle, hhayi ukufihla okuvela elangeni, indlela engcono kakhulu pholisa igumbi ngangokunokwenzeka. umsebenzi Uyacabangela (futhi, endaweni evulekile) futhi akusho ubuhlungu. izindaba ezinhle kakhulu, ngangokunokwenzeka, indlela yokuphila enempilo - ikakhulukazi ngaphandle ugwayi kanye notshwala, ingasaphathwa izidakamizwa. Nokho, cishe imimoya ezinye izindlela uvumele ekukhokheni: isibonelo, isipuni brandy, buhlanjululwe in ubisi olufudumele ukuphuza ngaphambi kokulala, isiguli muhle.
Kakhulu asebenzayo abameli abantu imithi ukusuthisa umzimba yensimbi. Futhi hhayi ekhemisi futhi "misela" nakhu ngale ndlela: ezinye nail ihlanzekile, kodwa ibuthuntu wanamathela amahora ambalwa e-apula, bese Kufanele udliwe. Inqubo iyaphindwa nsuku zonke.
Incoma ukuthi imithi yesintu inqwaba namanye amathuluzi ezenza imithi ye-TB ngempumelelo. Abaningi babo empilweni yesimanje, yebo, azitholakali kabanzi. Kodwa ezinye kungenziwa Kunconywa, futhi, hhayi ku-lieu, futhi kanye udokotela wakho ekunika inkambo ukwelashwa. By the way, ngokukhetha eyodwa noma elinye ikhambi Folk, akuyona engadingekile ukuba bonana nodokotela wakho kuqala ukuthi kulungile kuwe.
Futhi okubaluleke kakhulu ekulweni nesifo sofuba, njenganoma yiluphi ukwelashwa, - ukukholelwa amandla omzimba wakhe futhi ukwazi: ukululama ngokugcwele kungenzeka, okubaluleke kakhulu, ungadikibali!
Izimpawu izifo sibi zokuphefumula
Blue nevus (nevus blue Jadassohn - Tiche): izimbangela, izingozi, izimpawu ukuze kususwe. blue nevus
Angina obusebenzayo ekilasini - incazelo, ngezigaba kanye nezici
Indlela Ukwenza varicose emithanjeni ukwelashwa ekhaya
Ezingemnandi esivuthayo ukuzwa emlonyeni, kubangela nesenzakalo nokwelashwa ongakhetha
10-Windows: indlela ukukhubaza Ukugada umsebenzisi
Kanjani ukulungisa "isitimela" (ikhekhe izingane)?
Kuyini obala? Umgomo we ukusebenza ngendlela esobala kanye
U-Ivan Vyrypaev: izici zobuciko
Xoxani ngokuthi ukuba ubuthongo omuhle
Indlela anakekele Tulips ngezikhathi ezahlukene
TV "One Night of Love": abadlali kanye nencazelo
Tiraspol lapho? Tiraspol, Transnistria: ibalazwe, izithombe
Isikhundla sezempi "umphathi jikelele wezempi"
Isifingqo "451º Fahrenheit," Rey Bredberi. Umlando sokudalwa, umlingiswa oyinhloko
Skirt onobuhle iwe 2012 - nangezindlela ezihlukahlukene umusa